Daawo muuqaalka: Shirkadda Golis oo soo bandhigtay Adeeg loogu magacdaray Afgarad |
Daawo muuqaalka: Shirkadda Golis oo soo bandhigtay Adeeg loogu magacdaray Afgarad
Shirkadda Isgaarsiinta ee Golis Telcom ayaa kusoo bandhigtay magaalada Bosaso adeeg cusub oo ay usoo kordhisay macaamiisha adeegsata Mobile-ka Golis.
Munaasabad lagu daahfurayay adeegga cusub ee shirkaddu ay soo kordhisay oo loogu magacdaray “AFGARAD” ayaa kadhacday xarunta wayn ee shirkadda ay ku leedahay magaalada Bosaso iyadoo ay kasoo qaybgaleen masuuliyiin shirkadda iyo bahda saxaafadda.
Madaxa Suuqgaynta ee Shirkadda Golis C/raxmaan Cabdilaahi Dayax oo furay munaasbadda ayaa ka warbixiyay adeegga Afgarad.
Waxaa uu sheegay adeegan inuu dadwaynaha , ardayda iyo bahda warfaafinta uu ka saacidayo luuqadaha Englishka iyo Somaliga inay isku tarjumaan iyagoo isticmaalaya Mobile-ka Golis.
Cumar Ciise Maxamed Faaruuq, waa madaxa Hogaanka Ganacsiga ee shirkada Golis wuxuuna sheegay in adeegani Afgarad uu ka caawin doono bulshada isticmaalka iyo turjimaada luuqada English-ka.
Adeeg Afgarad oo ah qaamuus Somali To English iyo English To Somalia ayaa ah adeegii ugu horeeyey ee nuuciisa oo kale oo laga hirgaliyo gudaha Somaliya, adeegan ayaa bishii bixinaysaa lacag dhan .5 cent oo u dhiganta 10- kun oo sh, som ah oo qidmad ahaan kaaga go’aysa.
Shirkadda Golis ayaa horay ugu guulaystay hirgalinta adeegyo casri oo ay ka mid yihiin adeega Mobile Money Transfer MMT oo ah adeeg mobilekaaga lacagta kugu jirta aad kudukaamaysanaysid, kunaso oo codadka nashiidooyin gabayo iyo duco lagu xirto mobiilada marka lasoo wacayo , iyo adeegga Internetka ee Mobileka laga isticmaalo.